Beddelka buugaagta cusub ee Fariimaha 2021: Barnaamijka Xisaabinta Miisaaniyadda-Ugu Fiican
Bogga ugu weyn Beddelka buugaagta cusub ee Fariimaha 2021: Barnaamijka Xisaabinta Miisaaniyadda-Ugu Fiican
Buugga -cusub wuxuu siiyaa ganacsiyada yaryar fursad ay ku maamulaan falanqaynta xisaabintooda, si kastaba ha ahaatee, Buugga -akhrisku aad buu qaali u yahay, tanina waxay qasabtay in la raadiyo beddelka Buugaagta.
In kasta oo ay jiri karaan wax badan oo ah Freshbooks kale oo lagu beddeli karo, haddana waxaan eegi doonnaa dhowr kuwaas oo loo malaynayo inay yihiin beddelka Buugga Cusub ee ugu fiican.
Waxaa jira 30.7 million ganacsiyada yaryar gudaha Mareykanka taas oo ka dhigan 99.9 boqolkiiba dhammaan ganacsiyada Mareykanka (SBA, 2019). Mashquul yar ayaa caadi ahaan ah ganacsi kasta oo ka yar 500 oo shaqaale.
Dhammaan meheradahaas waxay leeyihiin hal shay - waa inay iyagu sameeyaan buugaag. Halka kuwa kale ay doorbidaan xirfadlayaal si ay u maareeyaan, qaar kale, gaar ahaan kuwa aadka u yar ma awoodaan inay helaan raaxo noocaas ah. Tani waa halka ay ka soo gasho softiweerka xisaabinta/xisaabinta sida Freshbooks.
Sida laga soo xigtay Blueprint.com, FreshBooks waa mid ka mid ah codsiyada softiweerka xisaabinta ganacsiga yar yar ee ugu caansan suuqa maanta.
Waxay ku habboon tahay milkiileyaasha gaarka ah iyo kuwa madaxa bannaan. Waxay kaloo bixisaa qorshe loogu talagalay dadka iskood u shaqeysta oo ay la socoto qorshe kooxeed.
Laakiin sidaan hore u sheegnay, Buug -yaraha cusub ayaa laga yaabaa inuu aad qaali ugu yahay meheradaha qaarkood, sidaa darteed, baahida loo qabo beddelka Buugaagta Cusub. Waxaan ku eegi doonnaa beddellada maqaalkan.
Si kastaba ha noqotee, ka hor intaanan bilaabin, waxay ku habboon tahay inaan fahanno sida saxda ah ee Freshbook u shaqeyso, ama waxay tahay.
Waa maxay Buugaagta Cusub
Buugaagta cusub waa softiweer xisaabeed oo ka caawiya ganacsiyada inay la socdaan kharashaadkooda, saacadaha la bixin karo, iyo biilasha. Aad bay caan uga tahay meheradaha yaryar, laakiin sidoo kale aad bay qaali ugu tahay meheradaha la sheegay.
Software-ka maaliyadda iyo xisaabaadka daruuriga ku salaysan waxaa la bilaabay 2003 ilaa iyo markaasna wuxuu noqday mid ka mid ah kuwa ugu fiican ciyaarta.
Buugaagta cusub oo ka duwan qaar ka mid ah beddelka Freshbooks ayaa bixiya taageero macmiil oo tayo leh. Waxa kale oo ay leedahay shaqooyin iyo astaamo muhiim ah oo si fiican u kala soocaya.
Softiweerku wuxuu hadda adeegsadaa malaayiin xarumood si loo casriyeeyo biilka macaamiisha iyo dabagalka waqtiga.
Intaa waxaa sii dheer, shaqaalaha madaxa -bannaan waxay u adeegsadaan inay dedejiyaan wareegga iibintooda iyo ururintooda. Waxa kale oo loo isticmaalaa in la siiyo dukumentiyadooda astaan ​​shaqsiyeed si ay u noqoto xirfadle.
Iyada oo leh dhammaan astaamaha quruxda badan ee Freshbooks ay siiso isticmaaleyaasheeda, ma noqon karto ku filan. Markaa haddii aad raadinayso softiweer leh shaqooyin kale ama ka qaalisan, akhri.
Waxa laga raadinaayo bedel cusub oo Freshbooks ah
Caan ku ah xisaabiyeyaasha iyo xisaabiyeyaashu si isku mid ah, Buugaagta cusub waa wax weyn software xisaabinta ganacsiga yar yar codsiga, laakiin waxaa laga yaabaa inaysan haysan wax kasta oo aad raadineyso. Nasiib wanaag, waxaa jira dalabyo badan oo kala duwan oo laga dooran karo.
Xitaa haddii aadan si buuxda u hubin waxaad raadineyso, waxaa waxtar leh inaad si gaar ah ugu fiirsato saddexda astaamood ee soo socda.
1. Isbeddel la'aan
Miisaanka ayaa laga yaabaa inaanay muhiim u ahayn madax -bannaaneyaha ama la -taliyaha, laakiin haddii meheraddaadu korayso, waxaa muhiim ah inaad haysato codsi kula kori kara. Beddelidda codsiyada softiweerku marna ma fududa, sidaa darteed xulashada arjiga ku habboon maanta waxay meesha ka saari kartaa baahida loo qabo in la beddelo codsiyada mustaqbalka.
Xitaa ganacsiyada yaryar waxay u baahan yihiin inay socodsiiyaan warbixinnada. Markaad fiirineyso xulashooyinka warbixinta, hubso inaad tixgeliso waxyaabaha soo socda:
Maxaa ka warbixinaya dalabka
Haddii warbixinnadu ay sahlan yihiin in la ordo
Haddii warbixinnada la hagaajin karo
Haddii warbixinnada la dhoofin karo
Qiimeyntu had iyo jeer waa muhiim. Haddii aad tahay ganacsi aad u yar ama qof madax -bannaan oo hadda bilaabanaya, qiimaynta ayaa laga yaabaa inay kaaga muhiimsan tahay tan ganacsi yar oo kobcaya.
Soo ogow sifooyinka ku jira qorshaha aad xiisaynayso, gaar ahaan maaddaama sifooyin badan laga helo kaliya qorshayaal qaali ah. Waa muhiim inaad si sax ah u ogaato waxaad bixinayso ka hor intaadan is qorin.
15 Barnaamijyada Shukaansiga Dhallinyarada ee ugu Fiican 2021 | Qabso Dareenkaaga, Dhallinyaro
11 Beddelka Buugaagta Ugu Fiican 2021
Hoos waxaa ah Beddelka Buugaagta Cusub
Invoicera waa softiweer wanaagsan oo loogu talagalay ujeeddooyinka maaliyadeed iyo xisaabinta, ugu habboon kuwa iskood u shaqeysta iyo shirkadaha. Waa biil degdeg ah, dabagalka waqtiga, iyo astaamaha lacag -bixinta fudud ayaa si fudud uga dhigaya mid ka mid ah beddelka Freebooks ee ugu fiican.
Iyada oo la socota Invoicera, mid ayaa heli kara xalalka softiweerka xisaabaadka oo loogu talagalay baaxadooda gaarka ah iyo baaxadda ganacsigooda.
Software-ku waa software xisaabin luqado badan leh, waxaana, laga heli karaa aaladaha IOS iyo Android. Invoicera waxay u oggolaaneysaa adeegsadayaasha inay ku raaxeystaan ​​waqtiyada tijaabada illaa 15 maalmood, ka dib waa la bixiyaa.
Hiaveage waa software kale oo ah softiweer kale oo xisaabin kara oo samayn kara waxa Freshbooks samayn kara, iyo, in ka badan.
Waxay kaa caawin kartaa samaynta qiyaasaha mashruuca ee meheraddaada, samaynta rasiidhada lacag -bixinta, qaan -sheegyada iyo xisaabaadka kharashyada isla isku -xidhka.
Software -ka ayaa sidoo kale kaa caawin doona inaad macaamiishaada biil u dirto saacadda isla markaana aad isla eegto kharashyadaada. Hiveage, waxaa laguu xaqiijinayaa warbixinno faahfaahsan oo ku saabsan xaaladda maaliyadeed ee ganacsigaaga.
Isticmaalayaasha Hiveage waxay bixin karaan ilaa $ 15 illaa $ 79 bishii iyada oo ku xidhan mugga macaamilka ganacsigaaga.
Barnaamijyada Golf -ka ee ugu Fiican sannadka 2021 | Faallooyin Buuxa
#3. Qaansheeg Berry
InvoiceBerry ma aha kaliya bedelka Freshbooks wanaagsan, sidoo kale waa bilaash - haddii aad maamusho liiska macmiilka ee saddexda ah.
Maaddaama ay tahay il furan oo softiweer ah iyo softiweerka kaydinta, waxay u haqabtirtaa baahiyaha buug-haynta ee shirkadaha dhexdhexaadka ah, bilowga, iyo xirfadleyda.
Qaansheegga Berry waxaad ku soo dejisan kartaa, daabacan kartaa, oo aad ku dhejin kartaa dukumeenti maaliyadeed oo weyn ilbidhiqsiyo gudahood. Intaa waxaa dheer, waxaad u abuuri kartaa macaamiishaada qaansheegad sumadeysan.
Tan iyo in ka badan ayaa ka dhigaysa InvoiceBerry mid ku habboon Buuggaagta Bilaashka ah
Waxaad ku heli kartaa InvoiceBerry pro app $ 30 oo leh 15 qaab-qaansheeg oo diyaarsan.
#4. Mashiinka Qaansheegta
Beddelka kale ee Freebooks waa Mashiinka Qaansheegta. oo leh mashiinka Qaansheegadka, waxaad ku helaysaa dhammaan astaamaha aaladda qaansheegadka ee internetka. Aaladda waxaa loo habeyn karaa si ay ugu haboonaato baahiyaha qaarkood dhowr wicitaan oo HTTP POST ah, oo ay karti u yeelatay API, oo ah il furan.
Mashiinka qaansheegtu waxa uu meesha ka saarayaa dhammaan kakanaanta soo saarista qaansheegta iyo xisaabinta guud ahaan.
Software -ka kaydinta goosashada wuxuu kaa caawinayaa inaad lasocoto waqtiga iyo jadwalka lacag bixinta, tani waa sababta ay u tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee Freshbooks kale.
Iyadoo Harvest, saacadahaaga lagugu soo dallaci karo iyo kuwa aan la dili karin ayaa si aad ah loo falanqeeyay si ay kaaga caawiyaan inaad ogaato meesha aad dadaal dheeri ah gelin karto meheraddaada.
Aaladda waxaa lagu dhex daray codsiyada Google, Trello, PayPal, Slack, iyo barnaamijyo kale. Waxaa laga heli karaa macruufka, Mac, iyo Android, $ 12 halkii isticmaale bishii.
Tilmaamahan iyo wax ka sii badan ayaa ka dhigaya Harvest -ka mid ku habboon Beddel Buugag -Lacageed.
Haddana mid kale oo ku habboon Freebooks. Iyada oo leh Wave, waxaad isku waafajin kartaa koontadaada bangiga, bayaanka kharashka, iyo xaashida dheelitirka si aad u hesho ujeeddooyin haynta buugga.
Softiweerku waa bilaash wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad haysato tiro macmiil ah oo aan xad lahayn.
#7. Buugaagta Degdegga ah
Helitaanka barnaamijkan softiweerku wuxuu ku siinayaa marin u helka waxyaabo kale oo badan, oo ay ku jiraan raad -raac mashruuc, maareynta mushaharka, iyo qaansheegta qaan -sheegta qiimo aan laga adkaan karin.
QuickBooks waa mid ka mid ah xalalka softiweerka xisaabinta ee ugu caansan halkaas. Softiweerka, waxaad ku bixin kartaa qaansheegta dufcadda, la soco biilasha taagan, samee canshuuraha iyo mushaharka marka la rabo.
Sida badi buugaagta kale ee bilaashka ah, QuickBooks waxaa laga heli karaa iOS iyo aaladaha Android.
Indy waa doorasho cajiib ah oo loogu talagalay kuwa iskood u shaqeysta ee raba in ay isu keenaan maamulkooda oo ay ka dhigaan qaansheegad, habaynta lacag bixinta, iyo biilasha mid fudud.
Indy waxay bixisaa qalab qaansheegad fudud oo leh astaamo awood leh. Waa kuwan waxa madax-bannaaniyaasha ku samayn karaan aaladda Indy's Invoices:
Ku xidh macaamiisha mashaariicda iyo qaansheegyada si toos ah.
Ku xidh raadiyaha wakhtiga si fudud loo isticmaali karo mashaariicda.
Ku dar saacado aan la soo dalacsiin qaansheegyada cusub ilbidhiqsiyo gudahood.
Si degdeg ah u samee oo u dir qaansheegyada adiga oo isticmaalaya qaabab la beddeli karo.
Ku hel lacag bixinta Stripe, PayPal, Zelle, iyo xulashooyin kale.
Indy waxay haysaa qalab dhan oo aad isticmaali karto si aad u caawiso xirfadaada xorta ah. Marka lagu daro aaladda qaansheegyada, waxaad abuuri kartaa soo jeedin, qandaraasyo, oo waxaad isticmaali kartaa aaladda faylalka si aad shaqadaada dhaqso u saxiixdo.
Waxa ugu fiican ee ku saabsan Indy waa qiimaha. Waxaad ku dhammayn kartaa dhammaan qaansheegtaada madaxa-bannaan iyo maamulka hal madal kaliya $5.99 bishii.
Xero ayaa si gaar ah iigu ah mid ka mid ah kuwa ugu wanaagsan ee aan ku beddeli karo Buugga -cusub. Tani waa sababta oo ah waxaad maamuli kartaa hantida, qaansheegta, cusboonaysiinta alaabada, iyo xitaa samayn kartaa xaqiijinta bangigaaga. Tan iyo in ka badan ayaa Xero ka dhigaysa beddel ku habboon Freebooks.
Software -ka ayaa laga heli karaa aaladaha macruufka iyo Android waxaana qiimihiisu yahay $ 20 ilaa $ 40 bishii.
Dib -u -eegista Knetbooks 2021: Knetbook Legit Ama Fadeexad | Siduu U Shaqeeyo
ZipBooks waa softiweer xisaabeed kale oo ku jira liiskayaga.
Mashruuca xisaabinta ee adag ee ganacsatada iyo shirkadaha ayaa u oggolaanaya macaamiisha inay adeegsadaan astaamaha aasaasiga ah lacag la'aan.
Waxaad bixin doontaa oo keliya adeegyada dhinac saddexaad oo laga heli karo barnaamijka softiweerka.
ZipBooks waxay soo gelisaa xogta bangigaaga si dib -u -heshiisiin degdeg ah. Waxay kaloo kaa caawineysaa inaad la socoto kharashaadka iyo dakhliga iyo waxyaabo kaloo badan.
Ruqsadda isticmaalaha keli ah o ZipBooks waa bilaash. Qorshayaasha adeegsadayaasha badan waxay ku kacayaan $ 15 illaa $ 35 bishii.
#11. Xikmad Badan
Sage Intact ee dad badan ayaa xitaa ka xoog badan FreeBooks. Software -ku wuxuu kaa caawinayaa inaad daryeesho alaabadaada iyo maareynta dakhliga.
Daabacadaha oo dhan, waxaad heleysaa adeegyada maaliyadeed ee muhiimka ah sida xisaabaadka la bixin karo iyo kuwa la qaadan karo, maaraynta socodka lacagta caddaanka ah, iyo biil bixinta.
15 Barnaamijyada Raadiyaha Raadiyaha ugu Fiican 2021 | Aasaasayaasha iyo Saldhigga Isticmaalaha
Tartamayaasha Salesforce Sannadkii 2021: Top 10 CRM Beddelka Salesforce
Maalgelinta $ 200k Dakhliga 2022: 10 Xulashada ugu Fiican Hantida
Macdanta Bitcoin waa habka abuurista bitcoin cusub iyadoo la xalinayo xujooyinka. Waxay ka kooban tahay nidaamyada kombuyuutarada oo ku qalabaysan…
Dib -u -eegista Daacadaha Daacadda ah 2022: Sidee bay u Shaqaysaa | Sharci ama Fadeexad
Quruxda dib u eegista alaabadu waxay ku jirtaa faa'iidada macluumaadka hore ee ay ku siiso. Aynu nidhaahno, adigu…